पत्रकार उत्सवसँग रोमान्टिक पुजा ! तस्बिरहरू – Kavrepati
Home / मनोरंजन / पत्रकार उत्सवसँग रोमान्टिक पुजा ! तस्बिरहरू
पत्रकार उत्सवसँग रोमान्टिक पुजा ! तस्बिरहरू
admin September 13, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 103 Views
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका पूजा शर्मा २९ बर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनको वि.सं २०४९ साल वैशाखको १७ गते सिन्धुपाल्चोकमा पूजाको जन्म भएको हो । पूजाले आफ्नो करिअरको सुरुवात चलचित्र ‘थ्रि लभर्स’बाट सुरु गरेकी हुन् तर फिल्म ‘प्रेमगीत’बाट भने उनको करिअर चम्कियो ।
पूजाले अभय गरेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बक्स अफिसमा हिट भयो । योसँगै उनको झनै चुलियो । पूजाले ‘प्रेमगीत’ अगाडि ‘मेरो बेष्ट फ्रेन्ड, मधुमास, चंखे शंखे पंखे, अझै पनि’ लगायतका चलचित्रमा काम गरेकी थिइन् ।
पूजाको करिअरको टर्निङ पोइन्ट निर्देशक सुदर्शन थापासँग भेटपछि भएको मानिन्छ । सुदर्शनले उनीसँग ‘मधुमास’पछि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छन् । सुदर्शनको निर्देशनमा पूजाले ‘मधुमास, चंखे शंखे पंखे, प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानी, म यस्तो गीत गाउँछु २, सम्हालिन्छ कहिले मन’ लगायतका चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् ।
पूजा पछिल्लो समयकी चर्चित र महंगी नायिका हुन् । उनले चलचित्रमा अभिनय गरेको १५ लाख भन्दाप माथिको पारिश्रमिक वुझ्दै आएकी छिन् । विभिन्न समयमा आफ्नै बोलीका कारण विवादमा समेत पर्दै आएकी यी नायिका पछिल्लो समय नायक आकाश श्रेष्ठसँगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छिन् । तर, पूजा आकाशलाई आफ्नो साथी मात्र भएको बताउँछिन् ।
पछिल्लो समय पुजा रंगपत्रकार उत्सव रसाइली लगायतसँग रोमान्टिक मुद्रामा पुलमा रमाएका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । जहाँ उनीहरू निकै खुलेको देख्न सकिन्छ । तस्बिर- उत्सव रसाइलीको फेसबुकबाट
Previous रक्षाले पहिलो पटक सार्वजनिक गरिन् छोरीसहित श्रीमानको तस्वीर [फोटो फिचर]
Next साउथ स्टार सामन्था र नागा चैतन्यको वैवाहिक सम्बन्ध संकटमा, डिभोर्सको तयारीमा